Diso Ny Governemantan’i Kambodza Nandray An’i Singapaoro Ho Libia Tao Anaty Lahatsary Iray Fampitandremana Manohitra Ny ‘Zo Sivily Tafahoatra’ · Global Voices teny Malagasy
Diso Ny Governemantan'i Kambodza Nandray An'i Singapaoro Ho Libia Tao Anaty Lahatsary Iray Fampitandremana Manohitra Ny ‘Zo Sivily Tafahoatra’
Voadika ny 03 Jona 2016 16:45 GMT
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary nilazana ny lanitr'i Singapaoro ho Libia. Loharano: YouTube
Tsy ela akory izay ny governemanta Kambodziana no namoaka lahatsary iray nampitandrina ireo olompireneny momba ny fiantraika ratsy amin'ny ara-tsosialy ateraky ny fampiasàna “tafahoatra” ny resaka zo sivily, toy ny hetsi-panoherana sy ny fahalalahana maneho hevitra.
Ilay lahatsary, nomena lohateny hoe ” Fampiasàna Amin'ny Fomba Baranahiny Ny Zo”, dia nakarina ho ao amin'ny fantsona YouTube ofisialin'ny governemanta ary navadika ho an'ny tena manokana hatreto. Nitanisàna ny zavatra niainan'i Libia sy Siria izy io, tamin'ny fampiasàna sary tranainy sy ankehitriny, mba hilazàna amin'ireo Kambodziana momba ny loza ateraky ny “fampiasàna diso” ny zon'izy ireo amin'ny fomba miteraka korontana eny anaty fiarahamonina.
Na izany aza, nanao hadisoana ilay lahatsary nanondro ny lanitr'i Singapaoro ho Libia talohan'ny nisian'ny revolisiona tao amin'ilay firenena sy izy rehefa levon'ny ady. Soa ihany, naverin'ny Preah Vihear Memorial nalefa ilay lahatsary talohan'ny namadihana ilay lahatsary niandohana ho lasa lahatsarin'ny tena manokana:
Ny Komity Miaro Ny Zon'Olombelona ao anatin'ny governemanta Kambodziana, izay namokatra ilay lahatsary, dia niaiky ilay hadisoana teknika, saingy nisisika tamin'ny filazàna fa bitika tsy misy dikany izany ary tsy niniana natao.
Fa tsy ilay hadisoana ara-jeografika ihany no niteraka resabe tamin'ilay lahatsary. Ho an'ireo vondrona mpikatroka sasany, ny hafatra tamin'ilay lahatsary dia nampitovy ny fisoloana vava ny zon'olombelona ho toy ny fanaovana baranahiny.
Notsinian'ny fitantaran’ilay lahatsary ny fijaliana nanjo ny olompirenena tany Libia sy Siria ho noho ny ady narehitr'izy ireo ihany tany amin'ny fireneny tsirairay avy :
Io no vokatry ny fampiasàna tsy araka ny tokony ho izy ny zo…Hitondra faharavàna, fivakisan'ny fianakaviana ary famoizana aina an'hetsiny maro, fahasimban'ny toeram-ponenana, fandatsahan-drà ny fampiasàna tafahoatra ny zo…Vokany, very daholo ny zo rehetra.
Libia sy Siria dia samy niaina fitroarana malaza nanoherana ireo mpitondra tsy refesi-mandidy tany aminy, tamin'ny 2011, izay nivoatra ka lasa ady an-trano nandravarava. Ilay vondrona milisy ISIS, izay samy hita any amin'ireo firenena roa ireo, dia vao mainka nanaratsy ny toe-draharaha.
Any akaikin'ny faran'ilay lahatsary, resahan'ny minisitry ny fiarovana ny fomba mety hipoiran'ireo revolisiona miloko ao Kambodza– manondro ireo revolisiona tsy nisy herisetra nitranga tany amin'ireo firenena tao anatin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ary noraisina ho toy ny nokopakopahan'ireo hery vahiny Tandrefana. Mino ireo mpikatroka fa ny hetsi-panoherana atao isankerinandro ‘Alatsinainy Mainty’ karakarain'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona hanoherana ny famoretana mananontanona ny mpanohitra ara-politika no tian'ny minisitra holazaina. Misisika milaza ny governemanta fa tsy holeferin'ny polisy ireo fivoriana tsy nahazoana alàlana ataon'ireo vondrona izay mikasa ny hanohintohina ny filaminana sy ny fiainam-piarahamonina.
Nezahan'ny minisitra ihany koa ny nametraka hoe ireo vondrona mpandàla ny zo sivily dia misy fifamatorana amin'ny Khmer Rouge, rehefa niteny izy tao anatin'ilay lahatsary hoe “Tsy maintsy sorohantsika ny fiverenana fanindroan'ny fitondràna mpanao vonomoka eto Kambodza.” Ampangaina ho namono olona maherin'ny iray tapitrisa tao Kambodza ny Khmer Rouge, tamin'ny andian-taona 1970.
Manahy i Chak Sopheap, tale mpanatanteraky ny Ivontoerana Kambodziana Miaro ny Zon'Olombelona, fa :
Mazava fa ny tanjon'io lahatsary io dia ny handemena ireo olontsotra tsy hampiasa feno sy ampilaminana ny zo maha-olona azy ireo, ary mampiseho ny hadisoana mibaribary tamin'ny fampiasàna ny lalàna anatiny sy iraisampirenena momba ny zon'olombelona. Tsy fampahatsiahivana saro-takarina koa ny hoe tsy haka lavitra amin'ny fampiasàna herisetra goavana ity governemanta ity, raha ilainy, mba hijanonana eo amin'ny fitondràna.
Angamba ny fikasan'ny governemanta tamin'ny namoahana iny lahatsary iny dia ny hampitahotra ny vahoaka; saingy tao anatin'ny roa andro, tsikaritry ny vahoaka ny hadisoana tamin'ny nanondroana an'i Libia ho Singapaoro. Ny sasany amin'ireo bitsika eto ambany dia mampiseho ny fihetsehampon'ireo maro mpampiasa ny aterineto :
hahaha tsy afaka na dia ny hiparitaka aza! Tena manahirana. Aiza ny reharehan'i Kambodza?
Tonga amin'ny faratampony satria ny lahatsarin'ny govt ao Kambodza manatsiny ny “zo sivily” ho niteraka ny fifandonana tany Siria/Libia
Andriamanitra o! O ry zalahy a, tsy hino an'ity ianareo hoe baomba marina ny zo! Tokony hatsahatsika ny fampiasàna azy ireny! Oooof, misaotra ry #KomityKambodzianaMiaroZonOlombelona
Hadisoana teknika? Famitàhana? Sa io mampiseho ny tsy fahaizamanaon'ireo manampahefana ireo?